Zutere onye ahịa taa onye ghọtara ihe bụ isi nke Twitter, Facebook, LinkedIn, wdg. Achọrọ m ịnye ha ụfọdụ nzaghachi na. malite iji na-eji mmadụ mgbasa ozi nke ọma. Onye ahịa ahụ bụ ọkachamara na-ere ahịa ma chọọ ịmalite iji ohere nke onye na-ajụ ase mana ọ maghị nke ọma otú ọ ga-esi dozie ọrụ ya chọrọ ka ọ na-agbalite usoro mgbasa ozi mmekọrịta.
Nke ahụ bụ nsogbu nkịtị. Ịkparịta ụka n'Socialntanet adịghị ka ịkparịta ụka n'ịntanetị. Na-ezute ndị mmadụ, mata njikọta, ma chọta ma wulite mmekọrịta gị na ndị na - eme ihe na atụmanya. Nweghị ike ịbanye n'ime mmemme mbụ nke mmiri ozuzo ma mee nke a (Ndị na-ezo mmiri bụ a mpaghara ịkparịta ụka n'ingntanet otu nke ahụ nwere mgbawa mgbawa). Ọ na - ewe oge, chọrọ igwu ala, ma mechaa malite ịmalite ịba uru na netwọkụ gị. Nke a bụ eziokwu n'ịntanetị dịka ọ na-anọghị n'ịntanetị.
Adọrọ a na-esonụ: Site na inye onyinye na mkparịta ụka na ikike ụlọ na ụlọ ọrụ gị - ndị njikọ ga-ekwu maka gị na ndị na - eme ihe ike ga - amalite iso gị. Isi ihe dị ebe a bụ inye, nye, nye… ị gaghị enye oke. Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị banyere ndị mmadụ na-ezu ohi ozi gị ma jiri ya na-enweghị akwụ gị ụgwọ… emela! Ndị folks ahụ agaghị akwụ gị ụgwọ, agbanyeghị. Ndi ga- ụgwọ bụ ndị ka ga-akwụ.
Nye ụzọ itinye aka: Nke a bụ ebe blog na-abịa kemfe! Ugbu a ị na-enwetara ndị mmadụ anya, ịkwesịrị ịkpọghachite ha ka gị na ha zụọ ahịa. Maka blog, ọ nwere ike ịbụ oku na-eme na sidebar gị ma ọ bụ ụdị ịkpọtụrụ. Nye ụfọdụ ndebanye aha maka nbudata ma ọ bụ webinars. Ọ bụrụ na enweghị ihe ọzọ, nye profaịlụ LinkedIn gị ka ijikọ ha. Ihe ọ bụla ị kpebiri, dị njikere ijide n'aka na ọ dị mfe ịchọta… ọ dị mfe karị ijikọ gị, ka ndị mmadụ ga-eme.
IZIR SocialTA ịkparịta ụka n'isn'tntanet abụghị ihe isi ike mana ọ nwere ike iwe ogologo oge. Dị ka itinye ihe mgbaru ọsọ ahịa maka ọnụ ọgụgụ oku ị na-akpọ, ọnụ ọgụgụ nke nzukọ ị na-aga na ọnụ ọgụgụ nke mmechi ị na-eme… amalite itinye ihe mgbaru ọsọ ụfọdụ na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ ị na-achọ, ọnụ ọgụgụ ị na-eso, na-ejikọ, ma na-eso na. Ozugbo ị banyere egwuregwu gị, wepụta onwe gị maka ọkwa ndị ọbịa ma ọ bụ nwee njikọ ndị ahụ ma ọ bụ nwee ndị ọbịa ọbịa na blọọgụ gị. Audizụ ndị na-ege ntị bụ ụzọ dị mma iji gbasaa netwọkụ gị.
Ka ị na-aga n’ihu na-arụ ọrụ netwọkụ gị ma na-eme mmekọrịta gị na ndị njikọ na ndị na - eme ihe ike, ị ga - enweta nsọpụrụ ha ma mepee onwe gị ohere ị na - amabeghị. Ana m achọ kwa ụbọchị ugbu a, na-ekwu okwu oge niile, na-ede akwụkwọ ma nwee azụmaahịa na - eto eto - nke a wuru site na atụmatụ ịkparịta ụka n'socialntanet. O were ọtụtụ afọ iji bia ebe a - mana ọ bara uru! Kpọgidere ebe ahụ!